Falanqaynta LinkedIn: Hagaha Dhamaystiran ee Suuqgeeyayaasha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Falanqaynta LinkedIn: Hagaha Dhamaystiran ee Suuqgeeyayaasha
Haddii shirkaddaadu u isticmaasho LinkedIn ganacsi, ka dib raadinta falanqaynta LinkedIn waa inay noqotaa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyadaada goobtan bulsho. Taasi waa sababta oo ah aaladaha falanqaynta ayaa ka caawiya suuq-geeyayaasha inay la socdaan cabbirrada warbaahinta bulshada ee kala duwan oo ay dib uga soo sheegaan guulaha.
Laakiin, maxay taasi muhiim u tahay?
Dabagalka falanqaynta LinkedIn waa lama huraan marka ay timaaddo tirinta dadaalkaaga suuqgeynta warbaahinta bulshada, iyo bixinta xogta aad u baahan tahay si aad u horumariso warbaahinta bulshada ROI oo aad u gaadho yoolalka warbaahinta bulshada. Ka dib oo dhan, haddii aadan la socon xogta, kaliya waxaad qiyaasaysaa in calaamaddaada ay buuxinayso yoolkeeda.
Si kale haddii loo dhigo, falanqaynta LinkedIn, waxaad si hubaal ah u odhan kartaa marka aad ku dhufatay guul cusub, sida kobaca dhagaystayaasha, ka qaybgalka ama beddelka.
Tilmaamahan falanqaynta LinkedIn oo dhammaystiran, waxaad:
Baro sida loo isticmaalo falanqaynta LinkedIn.
Soo hel cabbirada LinkedIn ugu fiican si aad ula socoto.
Eeg dhawr qalab oo falanqayn ah oo keeni kara aragtiyo qoto dheer oo ka dhigi kara warbixinta mid fudud.
Aan barano sida loo bilaabo la socodka mitirka shirkaddaada ee LinkedIn!
Sida loo isticmaalo falanqaynta LinkedIn
Si aad u bilawdo, ogow inaad bilaabi karto la socodka falanqaynta LinkedIn si asal ah ama qalab falanqaynta LinkedIn dhinac saddexaad, sida Hootsuite. Waddada aad maraysana waxay ku xidhan tahay istaraatiijiyadaada suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Haddii astaantaada kaliya isticmaasho LinkedIn, waxaad ka heli doontaa dhammaan xogta aad uga baahan tahay LinkedIn lafteeda. Haddii astaantaadu ay ku firfircoon tahay dhowr goobood oo warbaahinta bulshada ah, qalab dhinac saddexaad ah sida Hootsuite wuxuu noqon karaa mid waxtar leh. Waxay ku tusinaysaa cabirka waxqabadka dhammaan kanaalada bulshada ee hal meel ah.
Si aad u gasho dashboardka falanqaynta LinkedIn, ku bilow inaad gasho astaantaada LinkedIn. Kadib, fur bogga shirkadda LinkedIn ee aad maamusho. Ogsoonow in falanqaynta bogga ay kaliya arki karaan maamulayaasha bogga, ama ugu yaraan, dadka "falanqeeyaha" gelaya.
Ilaa iyo inta aad haysato ogolaanshaha saxda ah iyo marin u helka, waxaad awoodi doontaa inaad la socoto cabbiradaada LinkedIn.
Waxaa jira 5 nooc oo ah falanqaynta bogga LinkedIn:
Halbeegyadani waxay muujinayaan sida waxtarka leh ee cusbooneysiinta LinkedIn, haddii kuwa raacsan ay u arkaan inay ku mashquulsan yihiin, oo ay ka caawiyaan maamulayaasha warbaahinta bulshada inay arkaan isbeddellada iyo qaababka. Tusaale ahaan, haddii falanqayntaada cusboonaysiinta ay muujinayso ka qaybqaadasho hoose, waxaad isku dayi kartaa inaad beddesho wakhtiga aad jadwalayso qoraalada daabacaada, ama isku day inaad beddesho nooca macluumaadka la daabacay.
Si loo habeeyo daabacaadda dhejisyada LinkedIn si loo hagaajiyo falanqaynta cusboonaysiinta summadaada, qalab jadwal sida Hootsuite ayaa ku caawin kara. Sidoo kale ku tusinaya maalmaha iyo waqtiyada ugu fiican ee aad daabacan karto waxa ku jira, waxaad jadwal u samayn kartaa qoraalada si ay ugu haboonaato fariimahaaga kale ee bulshada, jadwalka badan ama jadwalka auto.
Halkan waxaa ah tafaasiil dheeri ah:
Falanqaynta LinkedIn, waxa kale oo aad ku arki doontaa waxyaalihii ugu muhiimsanaa, kaas oo sawir ka bixinaya cabbirada muhiimka ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay muujinayaan tirada guud ee jecel, faallooyinka iyo saamiyada 30-kii maalmood ee la soo dhaafay, iyo sidoo kale boqolkiiba isbeddelka 30-kii maalmood ee hore.
Halbeegyadani waxay muujinayaan cidda la falgasha waxa ku jira boggaaga iyo waxa cusub. Inaad wax badan ka ogaato kuwa raacsan waxay kaa caawin kartaa inaad abuurto waxyaabo si toos ah ula hadlaya dhagaystayaashaada, hagaajinta ka qaybgalka iyo kordhinta taraafikada.
LinkedIn waxay ku tusinaysaa xogtan iyadoo ku saleysan meesha ay joogaan taageerayaashaada, shaqada, kala sareyntaada, warshadaha ay ka shaqeeyaan iyo cabbirka shirkadda.
(Ka ogow wax badan oo ku saabsan tirakoobyada muhiimka ah ee LinkedIn halkan.)
Kuwani waxay aad ugu eg yihiin falanqaynta raacayaasha. Nambaradan waxay ku tusinayaan cidda ku soo socota boggaaga, laakiin maaha kuwa daacad u ah astaantaada LinkedIn - weli!
Si kale haddii loo dhigo, haysashada xogta tirakoobka ee muujinaysa cidda soo booqanaysa boggaaga waxay kaa caawin kartaa astaanta astaantaada oo ay ku habboonaato cusboonaysiinta booqdayaashaas. Taasi waxay keeni kartaa in booqdayaashu ay u beddelaan taageerayaal cusub, kordhinta ka qaybgalka bulshada.
Isticmaalka qalab jadwal sida Hootsuite waa hal dariiqo oo lagu gaadho dhagaystayaasha cusub. Markaad la socoto falanqaynta LinkedIn si aad u go'aamiso qoraalada sida ugu fiican u shaqeynaya, waxaad isticmaali kartaa Hootsuite si aad ugu dhiirrigeliso iyaga inay yihiin waxyaabo la kafaalo qaaday.
Waa kuwan sida kor u qaadida macluumaadka Hootsuite ugu shaqeeyo LinkedIn iyo Facebook:
Falanqaynta u doodista shaqaalaha
Marka loo eego Caawimada LinkedIn, falanqaynta u doodista shaqaalaha "waxay siisaa maamulayaasha bogga LinkedIn fursad ay ku cabbiraan isbeddellada ku jira ka qaybgalka shaqaalaha iyo xubnaha oo ay ku jiraan macluumaadka lagula taliyay shaqaalaha Shirkaddayda tab."
Tan waxa ku jira cabbirada sida tirada talooyinka loo sameeyay shaqaalaha ku xidhan bogga LinkedIn ee summadaada iyo tirada faallooyinka xubnaha LinkedIn ee ku saabsan qoraallada shaqaalaha.
Falanqaynta astaanta hibada
Halbeegyadan ayaa diyaar u ah maamulka sare ee maamulaya boggaga shaqada ee LinkedIn. Haddii mid ka mid ah yoolalkaaga warbaahinta bulshada ee LinkedIn ay tahay inaad soo jiidato karti cusub shirkaddaada, la socoshada cabbirradan ayaa faa'iido leh.
Falanqaynta post LinkedIn
Waxa kale oo aad hoos u dhigi kartaa cabbirada qoraal gaar ah adiga oo gujinaya Muuji xisaabaadka geeska midig ee hoose ee boostada:
Falanqaynta profile LinkedIn
Haddii aad bixiso adeegyo xirfadle ah profile kaaga LinkedIn halkii aad ka ahaan lahayd bog - ama haddii aad u shaqeyso sidii danjire sumad u ah shirkaddaada - waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sidoo kale la socoto falanqaynta astaanta. Tirooyinkan waxaa laga heli karaa boggaaga, hoosta Dashboardkaaga.
Halbeegyada LinkedIn ugu fiican ee la raad raaco
Waxaa jira cabbirro LinkedIn oo aan la tirin karin oo ay heli karaan suuqgeynayaasha, laakiin taasi miyay la macno tahay inaad la socoto, la socoto oo aad ka warbixiso dhammaantood?
Si fudud, maya. Taasi waa badan xogta.
Halbeegyada LinkedIn ee ay tahay inaad la socoto waxay kuxirantahay yoolalka suuqgeynta ee aad dejisay. Tusaale ahaan, haddii summadaadu ay tijaabinayso maqaallada hoggaanka oo isku dayaya in ay ka qaybgalaan dhegaystayaal cusub qoraalladeeda la daabacay, isha ku hay falanqaynta cusboonaysiinta. Haddii aad rabto in aad kor u qaaddo wacyiga summada ee goobtan, la soco taageerayaasha iyo falanqaynta booqdayaasha.
Haddii aad ku cusub tahay la socodka mitirka LinkedIn, ku bilow si fudud. Waa kuwan qaar ka mid ah cabbirrada aasaasiga ah ee ay tahay inaad la socoto.
Cusbooneysii cabirka si aad ula socoto
Halbeeggani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogaato wadarta tirada jeer ee cusbooneysiintaada LinkedIn ay muuqato ugu yaraan 300 millise seconds. Tani waxay la socotaa marka boostadu sidoo kale tahay, ugu yaraan, 50% aragtida isticmaalayaasha soo galay LinkedIn.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad raadraacdo aragtiyo gaar ah. Tani waa tirada jeer ee boostadaadu ay tusayso xubnaha shakhsi ahaaneed ee saxeexa (Si ka duwan riyooyinka, dareenka gaarka ah lama tirin doono marka isticmaale uu arko isla boostada marar badan.)
Falcelinta, faallooyinka iyo wadaagga
Qiyaasaha ka-qaybgalka ayaa tirinaya inta jeer ee boostadaadu heshay falcelin, faallo ama wadaag.
Falcelinta waxa loo isticmaalaa in lagu muujiyo jawaabaha shucuureed ee kala duwan ee nuxurkaaga. Isticmaalayaashu waxay dooran karaan emojis kala duwan si ay u muujiyaan inay jecel yihiin, u dabaaldegaan, taageeraan, jecel yihiin, dareemaan in boostada ay tahay mid caqli-gal ah ama ay dareemaan xiisaha nuxurka aad wadaagto.
Saamiyada waa inta jeer ee isticmaaluhu uu go'aansado in uu la wadaago macluumaadkaaga LinkedIn iyaga oo raacaya, ballaarinta gaadhista boostadaada.
Faallooyinkuna waa tirada faallooyinka isticmaale ee ku hadhay boostada hoosteeda:
Dhagsi ayaa kuu sheegaya wacitaankaagii ficilka wuu shaqeeyay. Si kale haddii loo dhigo, isticmaaluhu wuxuu ku hawlan yahay wax adiga ah LinkedIn, halkii uu ka gudbi lahaa oo keliya.
Marka la joogo LinkedIn, dhagsiinnada waxaa la tiriyaa marka xubinta la saxeexay uu gujiyo boostadaada, magaca shirkadda ama astaantaada. Kuma jiraan is dhexgalka kale sida saamiyada, falcelinta ama faallooyinka.
CTR, ama heerka garaacista, waa mitir la muujiyey sida boqolkiiba qaybisa tirada gujisyada boostadaadu hesho tirada aragtiyada ay heshay - waxay ku siinaysaa fikrad fiican ka qayb qaadashada.
LinkedIn waxay xisaabisaa heerka ka-qaybgalka iyadoo ku daraysa tirada isdhexgalka, gujisyada, iyo kuwa raacsan ee cusub ee la helay, oo loo qaybiyay tirada aragtiyaha ay boostadu hesho.
Qiyaasaha raacayaasha iyo booqdaha si ay ula socdaan
Falanqaynta raacayaashu waxay cabbiraan tirada dadka jecel inay ku xidhnaadaan astaantaada. Halbeegyada muhiimka ah ee summadaadu ay tahay inay la socdaan waxaa ka mid ah:
Tirada taageerayaasha wakhti ka dib: Tani waxay muujinaysaa sida tirada taageerayaasha sumaddaadu u korodhay (ama hoos u dhacday) ama wakhti go'an.
Dhammaan taageerayaasha: wadarta tirada guud ee taageerayaasha hadda ee bogga ganacsigaagu leeyahay.
Shirkadaha si ay ula socdaan: Tani waxay faa'iido u leedahay isbarbardhigga shirkadaha la midka ah kuwaaga.
Waxa kale oo aad la socon kartaa xogta xogta dadka raacsan si aad u hesho dareenka kuwa raacsan ee daacadda ah, halka ay ka shaqeeyaan iyo heerkooda xirfadeed ee kala sareynta.
Tani waxay muujinaysaa cabbirada muhiimka ah ee ku saabsan booqdayaasha imanaya boggaaga LinkedIn, laakiin kuwa aan ku raacin si ay si joogto ah u arkaan wararkaaga. Halbeegyada muhiimka ah ee summadaadu ay tahay inay la socdaan waxaa ka mid ah:
Aragtida bogga: wadarta tirada jeer ee boggaga la booqday.
Soo-booqdayaasha gaarka ah: Immisa xubnood ayaa soo booqday boggaaga, taasoo ku siinaya tilmaam wanaagsan inta qof ee xiiseynaya shirkaddaada.
Badhanka gaarka ah gujinta: Muuqaalka meheraddaada waxa ka mid noqon kara badhan gaar ah, oo ay ku jiraan 'Booq website', 'Nala soo xidhiidh,' 'wax badan baro,''Is diwaangeli,'iyo' Is-qor. Qiyaastaani waxay ku tusinaysaa inta gujis ee badhanka caadadu ku helayaan wakhti go'an.
Qiyaasta u doodista shaqaalaha si ay ula socdaan
Qiyaasaha falanqaynta u doodista shaqaalaha ayaa laga yaabaa inaanay danayn adiga haddii aad hadda ka bilaabayso boggaaga ganacsiga ee LinkedIn, laakiin waxay ku xidhan tahay yoolalkaaga warbaahinta bulshada, waxaa jira cabbirro muhiim ah halkan si aad sidoo kale ula socoto.
Waxaad la socon kartaa:
Isbeddelka tirada talooyinka.
Faallo ku saabsan qoraalada.
Dib u wadaagida qoraalada
Qiyaasta profile LinkedIn si aad ula socoto
Ugu dambeyntii, ogow inaad sidoo kale la socon karto mitirka LinkedIn adigoon lahayn astaanta ganacsiga. Haddii aad u isticmaaleyso masraxa saameeyn ganacsi ahaan ama aad la wadaagto maqaallada hoggaanka fikirka, tusaale ahaan, waxaad la socon kartaa kuwa soo socda si aad u go'aamiso sida qoraalkaagu u shaqeeyo:
muuqaalada raadinta: Tani waa tirada jeer ee profile-kaagu ka soo muuqday natiijooyinka raadinta muddada la cayimay.
Xisaabaadka Premium waxay heli doontaa macluumaad qoto dheer oo dheeri ah, oo ay ku jiraan kuwa isticmaala, waxa ay ka qabtaan shirkadda ay ka shaqeeyaan, iyo ereyada muhiimka ah ee ay ku heli jireen.
Aragtida boostada: Tani waa dulmar ku saabsan tirada aragtiyada aan gaarka ahayn ee qoraaladaada, dukumeentiyada ama maqaallada aad heshay. Guji jaantuskan 'LinkedIn metrik' si aad u aragto burburka dambe iyo si aad u aragto aragtiyaha sida falcelinta, faallooyinka iyo wadaaga faahfaahinta.
3 aaladaha falanqaynta LinkedIn ee waxtarka leh
Mararka qaarkood marka ay timaado dabagalka falanqaynta iyo ka warbixinta, waxaad dooneysaa qoto dheer iyo hufnaan dheeraad ah marka loo eego xulashada falanqaynta LinkedIn ee asalka ah. Qalabkan falanqaynta ee LinkedIn waxay kuu oggolaanayaan inaad si qoto dheer u qoddo, hagaajiso socodkaaga shaqada oo aad sare u qaaddo warbixinta cabbirkaaga.
Haddii shirkaddaadu ay ku firfircoon tahay goobo badan oo warbaahinta bulshada ah taas oo qayb ka ah istaraatiijiyada warbaahinta bulshada, tixgeli Hootsuite si aad u wanaajiso dhajintaada iyo warbixinta falanqaynta. Markaad ku xidhid koontadaada LinkedIn Hootsuite, kaliya ma awoodo jadwal u samee jadwal hore iyo waqtiyada ugu fiican, laakiin waxaad kartaa asidoo kale cabbir sida falanqayntaada LinkedIn ay u barbar dhigto cabbiradaada kale ee bulshada.
Falanqaynta Hootsuite ayaa kuu ogolaanaysa:
Raad raac, la soco oo barbar dhig jaangooyooyinka xisaabaadka bulsheed ee badan ee summadaada hal meel.
Deji halbeegyada waxqabadka, adoo sahlaya inaad ka shaqeyso horumarinta yoolalkaaga.
Abuur warbixino la beddeli karo, si cad oo loo akhriyi karo kuwaas oo ay fududahay in lala wadaago kooxdaada.
Baro wax badan oo ku saabsan falanqaynta Hootsuite iyo sida ay u habayn karto raadraaca summadaada dhammaan halbeegyadiisa halkan:
Hootsuite Insights ee Brandwatch
Qalabkan dhegeysiga bulsheed wuxuu ku siinayaa astaantaada cabbirro faa'iido leh oo ku saabsan wada-hadallada ka dhacaya astaantaada LinkedIn. Marka la soo koobo, qalabkani wuxuu kaa caawinayaa summadaada inay "maqlaan" wakhtiga dhabta ah waxa ay dadka kale ka sheegaan summadaada warbaahinta bulshada - oo si fiican u fahmaan dareenka astaanta - iyadoo la kormeerayo sheegidda iyo muujinta isbeddellada.
Dabagalka cabbiradan waxay ka caawin doontaa sumaddaada inay la socdaan sumcadda, ka qayb qaadashada wada sheekaysiga muhiimka ah oo ay ogaadaan ereyada muhiimka ah ee loo adeegsado xidhiidhka ganacsigaaga.
Wax badan ka baro qalabkan falanqaynta halkan:
Qalabkan falanqaynta waxaa loo isticmaali karaa in lagu cabbiro qiimaha dadaalkaaga bulsho, oo ay ku jiraan kuwa LinkedIn. Saamaynta Hootsuite waa aaladeena falanqaynta heerka-shirkadeed: way dhaaftay qiyaasaha qiyamka, sida kuwa jecel, si ay si cad u muujiso sida bulshadu u saamaynayso ganacsiga anagoo soo bandhigayna safarka macaamiisha oo dhan.
Tusaale ahaan, arag sida uu qof uga tago gujinta boostadaada LinkedIn si uu wax u iibsado. Ama akhrinta cusboonaysiinta LinkedIn ilaa isu-diiwaangelinta warsidahaaga.
Ogow in Hootsuite Impact ay la midowdo aaladaha kale ee cabbiraadaha sida Google Analytics, cabbiradana waa la jebin karaa oo lagu falanqeyn karaa waqti go'an ama olole.
Wax badan ka baro Saamaynta Hootsuite halkan:
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalka LinkedIn ee ganacsiga, fiiri hage-tallaabo tallaabo-tallaabo ah.
Waxbarashada suuqgeyntu miyay la socotaa baraha bulshada?